SpongeBob Squarepants Imidlalo yeKhompyuter yabantwana - Abantwana' Games And Software
SpongeBob Squarepants Imidlalo yeKhompyuter yabantwana
Idabi leBikini ezantsi '>
Isimo esivela Idabi leBikini ezantsi
Isiponge Bob Squarepants imidlalo yekhompyuter yabantwana ishushu. Nabantu abadala babonakala ngathi bayasithanda isiponji esimthubi. Ingxaki kuphela kubonakala ngathi kukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi imidlalo oza kuyidlala.
Iindidi zeSponge Bob Squarepants Imidlalo yeKhompyuter yaBantwana
Kukho iintlobo ezimbini ezisisiseko zemidlalo yekhompyuter yeSponge Bob Squarepants yabantwana ukuba bonwabele. Kukho imidlalo ekwi-intanethi kunye nemidlalo kwidiski. Jonga kokubini kwaye uya kufumana amathuba okuzonwabisa angapheliyo nokuba ungumntwana okanye ungumntwana entliziyweni.
Izibonelelo zaBantwana abaDlalayo
Iingcamango zeKhekhe zokuzalwa zabantwana ezilula
Iindlela ezili-15 ezilula zaBantwana zokwenza iMali ngokukhawuleza
Kukho iintlobo ngeentlobo zemidlalo Sponge Bob kwi-Intanethi ukuphanda. Ezinye zenziwe ngabalandeli benkqubo yeSponge Bob TV. Abanye bavela kwiwebhusayithi yeNickelodeon. Zonke ziya kubonelela ngeeyure zokuzonwabisa. Nazi ezinye izinto ekufuneka uzenzile:
Umanyano lweSpongebob Unoluhlu lwemidlalo yeSiponge Bob eyenziwe ekhaya onokuyikhuphela kwikhompyuter yakho. Imidlalo ibandakanya Isiponji Bob Volleyball , Isiponji Bob Squarepants: Umdlalo , Isiponji Bob SuperPants kwaye Isiponji Bob SuperPants Maze .
Imidlalo yePuff inikeza iintlobo ngeentlobo imidlalo Spong Bob ukuba nayo iyahambelana phones smart kakhulu.
Uzzoom inokukhuphela i Isiponji Bob Diner Dash . Zama uhlobo lwedemo lwasimahla okanye uthenge ingxelo epheleleyo nge $ 19.99.
Unokufunda uphononongo lweSponge Bob Diner Dash kwiMidlalo yeVidiyo yeLoveToKnow.
Ilebhu yeArcade une USponge Bob Collapse umdlalo ngokunjalo.
UNickelodeon inikeza imidlalo emininzi yeSiponge Bob kwiWebhusayithi yabo. Khetha kwi Umdlalo weSiponge Bob's Bubble Bustin ' , Isiponji Bob Squarepants Umdlalo bhanyabhanya we-3D , USponge Bob Avalanche kwiPlankton's Peak kunye nemidlalo yabantwana ebalaseleyo.
Imidlalo yeNickelodeon isimahla, kwaye akukho mfuneko yokuba ubhalise ukufikelela kuyo. Indlela entle yokuba abantwana bonwabe ngaphandle kokukhutshelwa okanye iifizi. Kukho iitoni zeminye imidlalo epholileyo apha. Akunyanzelekanga ukuba unciphise umntwana wakho kwiSponge Bob.
I-THQ yinkampani eyenza iintlobo ngeentlobo zemidlalo yevidiyo kwikhompyuter yakho nakwimidlalo eyahlukeneyo enjengePlaystation kunye neNintendo. Okwangoku, banemidlalo yekhompyuter yeSponge Bob Squarepants yabantwana. Izihloko zazo zeekhompyuter zibandakanya:
Imiboniso bhanyabhanya yeSponge Bob Squarepants Injongo kukufumana isithsaba sikaKing Neptune, njengakwimovie. Abadlali banokuba yiSponge Bob, iPlankton kunye neMindy.
Sponge Bob Squarepants: Idabi leBikini ezantsi -Umdlalo unemihlaba emihlanu onokuyihlola. Inabalinganiswa abathandathu abadlalayo kubandakanya uSponge Bob, uPatrick, uSandy, uMnu Krabs, uGary kunye no-squidward.
Sponge Bob Squarepants: Umqeshwa weNyanga -Dlala kumazwe amathathu abandakanya iindawo ezili-18 kuhambo lwakhe lokuya epakini yaseNeptune yeParadesi. USponge Bob utyelela le paki njengomvuzo wakhe wokuphumelela uMqeshwa weNyanga yexesha lama-27 ngokulandelelana. Mncede aye apho kulo mdlalo.
Isiponji Bob Squarepants: Izibane, ikhamera, iibhulukhwe! -Yabela iindima ezingaphezu kwama-40 bhanyabhanya omtsha I-Adventures eNtsha kaMermaidman kunye noBarnacle Boy kulo mdlalo. Emva koko unokujonga isiqephu semizuzu engama-30!
Isiponji Bob Squarepants: Nightmare yasebusuku -Kulo mdlalo uza kudlala kumaphupha eSponge Bob, ePlankton kunye noPatrick. Dlala amanqanaba amathandathu amaphupha abo namaphupha amabi.
Isiponji Bob Squarepants: IKrusty Kollection Olu seto yimidlalo emibini; Umqeshwa weNyanga kwaye Umsebenzi weKrabby Patty .
Le midlalo yonke ikalwe ngo-'E 'kuwo wonke umntu. Zingathengwa nge Amazon.com okanye kwiivenkile zeWal-Mart okanye zeThagethi.
Ubucwebe Begolide Umyili Ingxoxo Irings Ukwaluphala Nje Imiba Umntwana Indawo Yasemsebenzini Ukhuseleko Iindlela
Ngaba ungathanda imibuzo yabafundi bezikolo eziphakamileyo
ubungakanani 14 juniors yintoni kwabafazi
uyisusa njani i-inki yejeli ezingubeni
Kubiza malini ukufumana inja yomfazi kulungiswe
iingoma zehip hop zeendlela zomdaniso